Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) ကဘာလဲ။
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း သည် အင်္ဂါကိုယ်အတွင်းမှ လိင်အင်္ဂါဟော်မုန်းပိုင်းကိုထိသော ရောဂါဖြစ်သည်။ အဆိုပါဂလင်းများမှ လိင်အင်္ဂါဟော်မုန်းများကို ထုတ်ပေး၏။ အမျိုးသားများတွင် အဆိုပါဂလင်းများမှ ဝှေးစေ့များဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများတွင်တော့ သားဥအိမ်များဖြစ်ကြပါသည်။
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း ဖြစ်သောလူများတွင် သူတို့၏လိင်ဟော်မုန်းပမာဏမှာ အလွန်နည်းပါးပြီး အဖို အမ ကြီးထွားမှု ဥပမာ ရင်သားဖွံဖြိုးခြင်း၊ ဝှေးစေ့ဖွံဖြိုးခြင်း၊ ဆီးခုံမွှေးပေါက်ခြင်း စသည်တို့တွင် ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ရာသီစက်ဝန်းနှင့် သုက်ပိုးထုတ်လုပ်ခြင်းကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်၏။
မူလနှင့် တစ်ဆင့်ခံ လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း ဆိုပြီး အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။
မူလ – ဤအမျိုးအစားသည် လိင်ဂလင်းများမှ စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ဂလင်းများသည် ဦးနှောက်ဆီမှလာသော အချက်ပြများကို လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသေးသော်လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဟော်မုန်းမထုတ်နိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ဆင့်ခံ – ဤအမျိုးအစားသည် ဟိုက်ပိုသာလမတ် သို့မဟုတ် ပစ်ကျူထရီဂလင်းမှ စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လိင်ဂလင်းထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းချုပ်သော ဦးနှောက်အတွင်းမှ အပိုင်းများဖြစ်သည်။
Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း သည် အမျိုးသားများ၌ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အသက်ကြီးသော အမျိုးသားများတွင် တက်စတိုစတီရုမ်းလယ်ဗယ်ကျခြင်းမှာ အဖြစ်များ၏။ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် အမျိုးသား ၆၅ % ၌ တက်စတိုစတီရုမ်းလယ်ဗယ်မှာ အသက် ၃၀ – ၃၅ နှစ်လူများအောက် လျော့နည်းနေတတ်ပါသည်။
Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း သည် ဘဝတစ်သက်တွင် မှတ်တိုင်သုံးခုတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သန္ဓေသားဘ၀ ဖွံဖြိုးနေချိန်၊ လူပျိုဖော်မဝင်ခင် နှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးချိန် တို့ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပွားလာနိုင်သော လက္ခဏာများမှာ –
မူမမှန်သောလိင်အင်္ဂါများ – ဥပမာ အမျိုးသမီးလိင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်း
မဖွံ့ဖြိုးသောအမျိုးသားအင်္ဂါ သို့မဟုတ် မခွဲခြားနိုင်သော လိင်အင်္ဂါ
လိင်တံနှင့် ဝှေးစေ့များ ကောင်းမွန်စွာမဖွံ့ဖြိုးခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်ထည်နှင့်ယှဉ်လျှင် ခြေနှင့်လက်မောင်းများ ပိုရှည်နေခြင်း
နို့ရည်များထွက်ခြင်း (ပရိုလက်တင်နိုးမား အကျိတ်)
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမည်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပင်။
Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်းသည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည်။ သို့သော် တစ်ချို့တွင်တော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် ပိုးဝင်ခြင်းများကြောင့် လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း ရသွားနိုင်၏။ အဖြစ်များသော မူလ လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း အကြောင်းရင်းများမှာ –
Addison’s disease နှင့် ပါရာသိုင်းရွိုက်အားနည်းခြင်းတို့ကဲ့သို့ ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သောရောဂါများ
မျိုးရိုးဗီဇနှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုရောဂါများ – Turner syndrome(အမျိုးသမီးများတွင်) နှင့်Klinefelter syndrome(အမျိုးသားများတွင်)
တစ်ဆင့်ခံ လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်းဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ
အစားအသောက်လုံးဝမစားချင်ခြင်း (Anorexia nervosa)
ဂလူကိုကောတီးကွိက်များနှင့် ဘိန်းဆေးများ သောက်ခြင်း
Anabolic steroids များ ရပ်လိုက်ခြင်း
Kallmann syndrome ကဲ့သို့ ဗီဇဆိုင်ရာပြဿနာများ
လျင်လျင်မြန်မြန် သိသိသာသာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားခြင်း (အစာအိမ်ဖြတ်ထုတ်ခွဲစိတ်ခြင်းပြီးနောက် ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားခြင်း)
Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်သော်လည်း အတည်ပြုနိုင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ရများသော စစ်ဆေးမှုများမှာ
FSH နှင့် LH လယ်ဗယ်
သွေးအားနည်းခြင်းနှင့် သံဓါတ်အတွက် သွေးစစ်ခြင်းများ
တစ်ချို့သော ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာများလည်း လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ သားဥအိမ်များအား Sonogram လုပ်ခြင်း။ ပစ်ကျူထရီရောဂါကို သံသယရှိပါက MRI သို့မဟုတ် CT ဦးနှောက်ဓါတ်မှန်များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Hypogonadism (လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း၌ ဟော်မုန်းလယ်ဗယ်များကို ချိန်ညှိချင်ပါက ဟော်မုန်းဆေးများကို သောက်ရန်လိုကောင်းလိုနိုင်ပါသည်။ မိန်းကလေးငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများတွင်တော့ အီစထိုဂျင်နှင့် ပရိုဂျက်စတီရုမ်းများ သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကောင်ကလေးများနှင့် အမျိုးသားများတွင်တော့ တက်စတိုစတီရုမ်းအသုံးပြုနိုင်၏။ ထိုဆေးများမှာ သောက်ဆေးလုံး၊ အရေပြားကပ်ခွာ၊ အရေပြားလိမ်းဂျယ်လ် သို့မဟုတ် ထိုးဆေးအဖြစ်လာသည်။ တခြားလူများတွင်တော့ ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်းမှာ နာတာရှည်အခြေအနေဖြစ်ပြီး တစ်သက်တာကုသရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏လိင်ဟော်မုန်းလယ်ဗယ်မှာ ဆေးရပ်လိုက်သည်နှင့် လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါလူနေမှုပုံစံများကိုလိုက်နာကြည့်ပြီး လိင်ဂလင်းအားနည်းရောဂါရှိသော်လည်း ကျန်းမာစွာနေထိုင်လိုက်ပါ။
လိင်ဂလင်းအားနည်းခြင်းသည် အရိုးပွမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ကယ်လ်စီယမ် ဗီတာမင်ဒီတို့အား လုံလောက်စွာစားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံကို ပြောင်းပါ။ သင်နှင့်သင့်တော်မည့် အစားအသောက်လမ်းညွှန်များကို ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
ကုထုံးကြောင့် ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုများ ချိန်ညှိရန် အချိန်ယူပါ။
1. Male hypogonadism. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/male-hypogonadism/basics/definition/con-20014235. Accessed July 10, 2014.
2. Hypogonadism. http://emedicine.medscape.com/article/922038-overview#a1. Accessed June 23, 2016.
3. Hypogonadism. https://medlineplus.gov/ency/article/001195.htm. Accessed October 25, 2014.
4. Hypogonadism. http://www.healthline.com/health/hypogonadism#Overview1. Accessed Novenber 19, 2015.